‘भारत’ की बेहुलीलाई सलमानको यस्तो उपहार - Janakpur Today
‘भारत’ की बेहुलीलाई सलमानको यस्तो उपहार
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री कट्रिना कैफ चाडै स्टार सलमान खानसँग चलचित्र ‘भारत’ मा देखिदै छिन् । दुवैको मित्रता निकै गहिरो रहेको छ । कुनै समय दुवैविच अफेयरको समाचार पनि बाहिरिएको थियो । तर रणबीरसँग कट्रिनाको अफेयरपछि सलमान र कट्रिना बीच दुरी बढेको थियो ।
सलमानले कट्रिनालाई एक ब्राण्डेड कार गिफ्ट दिएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सलमान खानले हालै चार महंगा कारा किनेका थिए । सलमानले लग्जरी रेन्ज रोवर किनेका हुन् । त्यस मध्ये एक कार उनले कट्रिनालाई गिफ्ट दिएका छन् । उनले गिफ्ट दिएको रेन्ज रोवरको मुल्य २ करोड ७२ लाख रहेको बताइएको छ । कार पाएसँगै कट्रिनाले सो कारको तस्विरलाई पुरानो कारसँग तुलना गर्दै सामजिक सञ्जालमा शेयर गरेकी थिइन् ।
भरत फिल्म शुटिङ हुनुभन्दा पहिला नै भाइरल भएको फोटोमा सलमान र कट्रिना विवाहको पहिरनमा देखिएका थिए । चलचित्रमा कट्रिना कैफ मुख्य नायिका रहनेछिन् । चलचित्र सुटिङ हुनुभन्दा पहिला चलचित्रको टीजर सार्वजनीक भएको थियो ।
चलचित्रको निर्देशन अली अब्बास जफरले गरेका छन् । चलचित्रका निर्माता अतुल अग्निहोत्री हुन् । भारतमा सलमान खान र कट्रिनाका साथै ज्याकी श्राफ, सुनील ग्रोवर र दिशा पाटनी पनि देखिनेछन् । यो चलचित्र २०१९ को इदको अवसरमा सार्वजनिक गरिनेछ ।
अन्तगृह परिक्रमा आज , होली भोली मनाउने
अभिनेत्री सरिता लामिछाने द्वारा चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा
जनकपुर टुडे मेडिया ग्रुप प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका प्रदेश नं. २ को लोकप्रिय पत्रिका हुन ।
प्रश्नपत्र आउट हुने क्रम जारी ,शनिवार हुने स्वास्थ्य विषय प्रश्नपत्र पनि आउट !
काठमाण्डौंमा पनि प्रश्‍नपत्र आउट, के अब प्रदेश २ काे जस्तै परीक्षा स्थगित हुन्छ ?
मोदीलाई ट्विन्कल खन्नाको छड्के
अनौठो विद्यालय जहाँ शुल्कको साटो लिइन्छ प्लास्टिकको फोहर
स्थानीय तहका लागि एकैपटक १३ हजार बढीको संख्यामा कर्मचारी भर्ना खुलाउँदै
ससुरालीको वंशै सिध्याएको आशंका गरिएका ज्वाई नै झुण्डिएको भेटियो